वडालाई ‘लाइटिङ्ग’ हब बनाउँछु : अध्यक्ष बाग्ले – KhabarPurwanchal
खबर पूर्वाञ्चल, २५ माघ २०७६, शनिबार १३:५९
वडा अध्यक्ष माधवराज वाग्ले
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विराटनगर १० को वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष हुन्, माधवराज वाग्ले । तत्कालिन एमाले टिकट नदिएपछि उनले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका वाग्ले वडाअध्यक्षमा ८ सय ७५ मत ल्याएर निर्वाचित भए । वडाको नेतृत्व समालेपछि उनले समिति बजेट र स्रोत साधानको उचतम प्रयोग गरि वडाको विकासमा लागेका छन् । वडा भित्रको विकास र समस्यामा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्ष वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी
वडा भित्र विकासको काम कसरी भइरहेको छ ?
वडा भित्र दुई किसमले विकास भइरहेको छ । एउटा एडिपीको लागानिमा सडक निर्माण भइरहेको छ । अहिले वडा भित्रको सडकमा ड्रेन, पिचको कामहरु भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले धामाधम कामहरु गर्दै आएको छ । एडिभीको लगानिमा बनेको परियोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एडिभीको लगानिमा सबैभन्दा बढी योजना परेको वडा पनि हो । वडा भित्रको मापदण्ड अनुसारको ठूलो सडक एडिपीको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । वडा भित्रको ३३ वडा गल्ली सडक ग्राभेल, पिसीसी, आर.सी.सी.को काम भइरहेको छ । वडाले बिनायोजन गरेको बजेटले वडा भित्रको गल्ली सडकहरू बन्दैछ ।
वस्ती विकासको काम कसरी भएको छ ?
यस वडा शैक्षिक संस्था र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरु र सरकारी कार्यालयहरू बढी भएको वडा पनि हो । यस वडामा अन्यतको तुलनामा जनघत्व पनि बढी छ । यो वडा शहरउन्मुख पनि हो । वस्ती विकासक पनि भइरहेको छ । वडा भित्र नयाँ घरहरू बन्ने क्रमम पनि बढेको छ । बस्ती बसेको सडकहरूमा सडक पनि पु¥याउनुपर्ने दायित्व हाम्रो हो । सिमित बजेट र स्रोत साधनको परिचालन गरेर भएपनि वडा भित्र व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकासको काम भइरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी विद्यालय भएको वडा हो यो । विद्यार्थीको हुलले सडक जाम हुने गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि के पहल गर्दैहुनुहन्छ ?
वडा भित्रका सम्पूर्ण नजी माविका प्रधानध्यापकहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौं । अहिले सडक पिच भइ सडक पेटिका पनि बनेको छ । हरेक विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउँदा र छुटि भएपछि सडक पेटिकाबाट हिड्न प्रअहरूलाई निर्देशन गर्नु भनेर मैले आफै भनेको छु । यस्तै विद्यालयका बसहरू सडक बाहिर जथाभावि पार्किङ्ग गरिदै आएको थियो । मैले सडक जाम हुने भएकोले हटाउन पत्रचार गरेको छु । अहिले यो समस्या हटेर गएको छ । विद्यालयले अहिले परिसर भित्र पार्किङ्ग गर्दै आएका छन् । ट्राफिक प्रहरीसँग पनि सहकार्य भइ विद्यालय वरिपरि हुने सडक जामको व्यवस्थापन गरिदै आएको छ ।
शिक्षाको क्षेत्रमा कसरी काम भइरहेको छ ?
यस वडा भित्र तीन वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको छ । भानु, नारयण र आर्दश आधरभूत विद्यालय छन् । भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न आर्दश आधरभूत विद्यालय रहेको छ । भानु र नारयण विद्यालयलाईको भौतिक पूर्वाधार र गुणस्त सुधारमा लागि परेका छौं । आर्दश आधरभूत विद्यालय अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपठान सुरु भएको छ । अन्य विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनठान गराउने तयारी गरि गुणस्तर सुधार गर्नेछौं ।
यो वडा डेंगो प्रभावित क्षेत्रमा पर्दछ । नियन्त्रणमा कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
एक चरणमा सकिएपछि अहिले पुनः वडा भित्र मेलाथिन र्छत्रिने काम भइरहेको छ । एक जना डेंगोबाट मृत्यु पनि भयो । अहिले डेंगोबाट बच्न औषधी छिटने काम भइरहेको छ । प्राय वाड भित्र सबै क्षेत्रमा डेंगोबाट बच्न मेलाथिन छत्रिने काम पहिलो चरणको सकिएको छ । स्वास्थ्य सचेतनाको अभियान अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र रहेको छ । १० देखि ४ बजेसम्म संचालन हुन्छ । अहिले यहाँ प्राथामिकत उपचार हुन्छ । यहाँबाट ३० प्रकारको औषधी पनि वितरण भइरहेको छ । स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यहाँका जेष्ठ नागरिकलाई शिविर पनि गर्दै आएका छौं ।
आगमी योजना के छ ?
वडा भित्रको ठूलो सडक एडिभिको लगानिमा ९५ प्रतिशत ड्रेनसहित कालो पत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । बाँकी ५ प्रतिशत बन्न बाँकी छ । अहिले बाँकी रहेको सडक निर्माणको कामहरू पनि भइरहेको छ । त्यसपछि हाम्रो दायित्व भनेको अब गल्ली सडक निर्माण गरिनुपर्ने छ । वडा भित्रको गल्ली सडक आरसीसी, ग्राभेल गर्ने लक्ष्य छ ।
मेरो कार्यकालपमा वडा भित्रको सम्पूर्ण गल्ली सडक निर्माण पुरा हुने लक्ष्य राखेर कामहरू भइरहेको छ । वडालाई सुन्दर बनाउने र ‘लाइटिङ्ग’ हवको रूपमा वडालाई चिनाउने मेरो लक्ष्य छ । १० नम्बर वडा भित्र १ हजार १ सय ३२ वटा बिजुलीको पोलहरू छन् । यी सबैमा एलईडी बल्प राख्ने योजना छ ।